Julian Brandt oo hoos u dhigay fursadaha uu ugu biiri karo kooxda Liverpool – Gool FM
Julian Brandt oo hoos u dhigay fursadaha uu ugu biiri karo kooxda Liverpool
(Liverpool) 07 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Bayer Leverkusen ee Julian Brandt ayaa hoos u dhigay wararka soo jeedinaya inuu ku biiro karo naadiga Liverpool suuqa kaga iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
23-sano jirkaan Brandt ayaa bandhig wacan ka sameeyey kooxda Leverkusen xilli ciyaareedkan kaddib markii uu dhaliyey sagaal gool, isla markaana uu caawiyey 18 gool oo kale 41 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Liverpool ayaa si xoog leh loola xiriirinayey xagaagan inay u dhaqaaqi doono xiddigan 24 kulan u saftay xulka qaranka Germany, kaasoo la rumeysan yahay in heshiiskiisa haatan lagu burburin karo adduun dhan 21.5 milyan oo gini.
Yeelkeede, Brandt ayaa qirtay inuu ku raaxaysanayo nolosha garoonka BayArena, isla markaana uu qorsheynayo inuu sii joogo.
“Anigu waan ku raaxaysanayaa nolosheyda, waxaan haystaa heshiis aan kula jiro Bayer illaa sanadka 2021, sidaa darteed waqti xaadirkaan wax waliba waa ay hagaagsan yihiin, sida ay wax u socdaa anigu waan joogayaa, waxaan doonayaa inaan xilli ciyaareedka ku dhameysto sida ugu fiican ee aan awoodno.” ayuu Brandt u sheegay website-ka rasmiga ah ee Bundesliga.
Kooxaha Juventus iyo Real Madrid ayaa sidoo kale dhowaan soo bandhigay xiisaha ay u hayaan weeraryahankan Brandt.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Barcelona vs Liverpool ka hor kulankooda caawa… (Kooxdee xiddigaha ugu badan ku leh?)
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta goolkii ugu quruxda badnaa bishii April horyaalka Premier League oo la shaaciyey